List uye Photo
mvura tangi furidza Kuumbwa Machine
500L Furidzira paaivaumba Machine
1000L Ridzai richigadzirisa Machine
2000L Ridzai richigadzirisa Machine
3000L Ridzai richigadzirisa Machine
5000L Ridzai richigadzirisa Machine
10000L Ridzai richigadzirisa Machine
makemikari tangi furidza Kuumbwa Machine
ichiyangarara furidza Kuumbwa Machine
nhovo furidza Kuumbwa Machine
kumanikidzwa tangi furidza Kuumbwa Machine
mugwagwa dhiramu furidza Kuumbwa Machine
rezuva mvura tangi furidza Kuumbwa Machine
matatu akaturikidzana vachiridza Kuumbwa Machine
mvura kurapwa tangi furidza Kuumbwa Machine
10000L Furidzira richigadzirisa Machine 10000L 1-3 akaturikidzana
5000L Furidzira richigadzirisa Machine 5000L 4-6 akaturikidzana
5000L Furidzira richigadzirisa Machine 5000L 1-3 akaturikidzana
3000L Furidzira richigadzirisa Machine 3000L 1-3 akaturikidzana
2000L Furidzira richigadzirisa Machine 2000L 1-3 akaturikidzana
3000L Furidzira richigadzirisa Machine 3000L 4-6 akaturikidzana
2000L Furidzira richigadzirisa Machine 500L 4-6 akaturikidzana
1000L Furidzira richigadzirisa Machine 1000L 4-6 akaturikidzana
1000L Furidzira richigadzirisa Machine 1000L 1-3 akaturikidzana
60L kufa musoro nhovo Machine paJoridhani
IBC tangi furidza Kuumbwa Machine
50-100L furidza Kuumbwa Machine
20-50L furidza Kuumbwa Machine
Plastic Ridzai richigadzirisa Machine. The chigadzirwa kugutsa GB13508-92, SN04499.2-95 kudiwa.
Supply Mano: 20 Set / Sets por Year
Kavha Details: kavha kwakakodzera nokuti rwendo
Lead Time: mazuva 100 kana takagamuchira dhipoziti yako
MVURA kurapwa tangi kuridza KUUMBWA MACHINE
Ukobvu controll gadziriro Japanese MOOG;
-Kuedza sikuruwa adopts IKV design, dzakakwirira potency uchanyangadika nechokwadi mashoko chaibva.
-Adopt Frequency kudzora gwenya hurongwa kuderedza simba rakawanda.
-Adopt Parison ukobvu controller Moog 100 pfungwa, kuti ukobvu kunyange uye kuchinja tangi uremu iri guru span.
-Fully automatic, nyore kuti ishande, vakadzi vaviri vanogona kushandisa muchina, kugadzirwa mutsetse wose vanofanira 3 kana 4 munhu chete.
-High goho maringe broken Kuumbwa muchina
-Save mbishi zvinhu 25% - 35% maringe broken matangi.
-Perfect Impact nemishonga maringe broken matangi.
-Multi akaturikidzana co-extrusion.
-Zvinhu zvokuimba ruoko anogona kutora kunze chigadzirwa kwaita.
Furidza Kuumbwa kwacho
Baya jekiseni zvinobva uchafira musoro-ichivhuvhuta-Kuumbwa-chigadzirwa
Customized maererano mutengi chipfuro zvigadzirwa
Shoma VOLTAGE midziyo
Chinese TOP BRAND AND Finessi JAPAN
Samsung OR GEFRAN ITILY
RUSVINGO THINKNESS CONTRAL SYSTEM
SERVO MAFUTA pombi
Zvigadzirwa uye mabasa vari zviwanikwe ane nevimbiso pamusoro yepamusoro uye unongotaura. Tinobatsirwa munhu inoomesera unhu kudzora gwara nevamwe utariri hwedu. Maererano aforesaid nomutemo zvinhu zvedu zvose vari kuedzwa pamusoro parameters siyana kuitira kunzwisisa kwakakwana unhu hwavo.
mutengi vaigona kutuma dzaishandisa vavo mutengesi wacho fekitari kudzidzisa, kusanganisira muchina oparesheni, Nokuraramisa & nyore kugadzirisa;
Kana pamusoro zvinokumbirwa mutengi, mutengesi wacho mukoti aigona kudzidzisa mutengi wacho dzaishandisa ari mutengi kuti fekitari iri nguva kugadzwa & kuchinja;
Kurovedza iri pachena;
Installation & kuchinja:
The mutengesi vaigona kutuma makanika kuzorwa zvinokumbirwa mutengi kuisa uye kuchinja michina kwevhiki imwe fekitari mutengi wacho.
Mutengi anofanira kuchengetedza pachine pamberi hurukuro yacho michina;
Mutengi anofanira kuripira injiniya kuti vhiza chikumbiro cost, kumativi mhepo matikiti, zvokudya & bhodhi pamberi kwake;
The zvinovimbisa nguva gore rimwe pashure michina ichiita mabasa fekitari Mutengi wacho, kana chete dambudziko iri chikonzero nokuda yepamusoro kuzvidzora kana chero chikonzero pedyo mutengesi. Isu achakupaiwo kutsiviwa zvikamu pachena uye mainjiniya dzedu achakutungamirira sei kugadzirisa matambudziko.
Previous: 80L kufa musoro nhovo Machine paJoridhani
Next: 60L kufa musoro nhovo Machine paJoridhani
Hdpe Water Tank Ridzai paaivaumba Machine
Pe Water Tank Kuita Machine
Plastic Water Tank Kuita anoridza Machine
Water Storage Tank Ridzai Kuita Machine